မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-03 > ယေရှုနဲ့အတူ
သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမိမိ၏မျက်မှောက်တော်၌လာပြီးအသက်ရှင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သူကသူနှင့်အတူရှိနေခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ သူနှင့်အတူရှိနေခြင်း၊ သူနှင့်အတူရှိနေခြင်းတို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်သင့်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူနှင့်ပိုမိုမိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်နှင့်သူ့ကို ပို၍ ပို၍ သိကျွမ်းလာရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုသိကျွမ်းပြီးသူသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယေရှုကနားထောင်သူများအားမိမိထံလာရန်သာမကသူ၏ထမ်းပိုးကိုထမ်းရန်မိန့်မှာခဲ့သည်။ ယေရှုသည်မိမိ၏“ ထမ်းပိုး” အကြောင်းပြောဆိုရုံသာမကသူ၏ထမ်းပိုးသည်“ မိမိ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး” ဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြသည်ကိုသတိပြုပါ။ ထမ်းပိုးသည်သစ်သားစားပွဲဖြစ်ပြီးနွားနှစ်ကောင်၏လည်ပင်းတွင်တွဲထားသည်။ သူတို့ကကုန်ပစ္စည်းများကိုအတူတကွဆွဲယူနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ထမ်းပြီးသော ၀ န်နှင့် ၀ န်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုခွဲခြားရန်ခွဲခြားထားသည်။ ထမ်းပိုးသည်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပေးပြီးရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအသစ်လည်းပါဝင်သည်။ ဤသည်ဆက်ဆံရေးသည်သဟာယလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သူနှင့်ဆက်သွယ်မှုတွင်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကြီးမားတဲ့အုပ်စုဝင်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုမခေါ်ခဲ့ဘူး။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ရင်းနှီးသောနှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတွင်နေထိုင်လိုသည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့အားထမ်းပိုးကဲ့သို့ချိတ်ဆက်ထားသည်ဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယေရှု၏ထမ်းပိုးကိုထမ်းခြင်းဟူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်တော်နှင့်တန်းတူဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာတိုးများလာစေရန်ရင်းနှီးသော၊ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ တက်ကြွသောဆက်နွယ်မှုသို့ခေါ်ဆောင်သည်။ ငါတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကြီးထွားလာသည်။ သူ၏ထမ်းပိုးကိုထမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုကြိုးစားရယူရန်မကြိုးစားသော်လည်း၎င်းထံမှလက်ခံရန်ကြီးထွားလာသည်။
ယေရှုအားထမ်းပိုးအောက်၌ခတ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်သူ၏အလုပ်တွင်ပါ ၀ င်ရုံသာမကသူနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့်သူ့ထံမှသင်ယူခြင်းကိုလည်းဆိုလိုသည်။ ဤနေရာတွင်ပုံရိပ်မှာယေရှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သင်ယူသူတစ် ဦး ၏ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ သူသည်အကြည့်ကိုကြည့်။ သူ့အနားသို့လျှောက်သွားပြီးသူ့ရှေ့မှာစိုက်ကြည့်နေမည့်အစားသူ့ကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုနှင့်အတူသွားလာရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရှုမြင်ပုံ၊ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုသာအာရုံစိုက်သည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အရာအပေါ်တွင်သာအာရုံစိုက်သည်။ သူနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းဟူသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပြီးသူမည်သူဖြစ်သည်ကိုအမှန်တကယ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Das Joch, das Jesus uns anbietet ist sanft und angenehm. An anderer Stelle im Neuen Testament wird es verwendet, um das freundliche und gütige Handeln Gottes zu beschreiben. «Ihr habt geschmeckt, dass der Herr freundlich ist» (1. ဓာတ်ဆီ 2,3). Lukas beschreibt Gott: «Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen» (Lukas 6,35).
သခင်ယေရှု၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်ထမ်းပိုးဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအထူးဆန်းဆုံးစကားလုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဝန်ကိုလေးလံသောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်မဟုတ်လော အကယ်၍ ၎င်းသည်အလင်းဖြစ်လျှင်၎င်းသည်မည်သို့သော ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးဖြစ်နိုင်မည်နည်း။
သူ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်ရိုးရိုးလေး၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထက်ထမ်းရန်ဝန်ထုပ်နည်းပါးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်ခြင်း၊ ခမည်းတော်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌ရှိသောသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆက်ဆံခြင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤထမ်းပိုးကိုအတူတကွထမ်းဆောင်။ သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူရာကိုသင်ယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးသည်။ ဤအချက်ကိုအလေးအနက်ပြုရန်ယေရှုကဤအတွေးကိုနှစ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြောပြီးဒုတိယအကြိမ်တွင်“ ငါတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်” အနားယူမည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်ပါသောအနားယူခြင်းဟူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကိုရပ်တန့်ရုံမျှမကပါ။ သူသည်ဟေဗြဲအယူအဆအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် - ရှာလုံသည်မိမိလူမျိုးတော်အားကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရရှိရန်နှင့်ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်၏နည်းလမ်းတော်များကိုသိရှိရန်ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ - ယေရှုကသူခေါ်ဆိုသူများကိုဘာပေးချင်သလဲ။ သင်၏စိတ်နှလုံးအတွက်အနားယူခြင်း၊ လန်းဆန်းမှု၊ ဘက်စုံကျန်းမာခြင်း။
ဤအချက်မှကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှုထံမလာလျှင်အခြားဝန်ထုပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမှန်တကယ်ပင်ပန်းစေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ထမ်းဆောင်ရမည့်အခြားဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများဖြစ်သည်။ သူနှင့်အတူရှိခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်ထံမှသင်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသိစေသည်။
ယေရှု၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်နှိမ့်ချခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ငြိမ်သက်မှုမည်သို့ရရှိစေသနည်း။ အဘယ်အရာသည်ယေရှုအတွက်အထူးအရေးကြီးသနည်း။ သူကဖခင်နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးသည်တကယ့်ကိုပေးကမ်းစွန့်စားမှုဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
ခမည်းတော်သည်အခွင့်ပေးတော်မူသောကြောင့်၊ သူသည်ဖခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအပြန်အလှန်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဒီဆက်နွယ်မှုကထူးခြားတယ်။ ဖခင် မှလွဲ၍ ဘယ်သူမှဒီနည်းကိုသိသူမဟုတ်သလိုဒီနည်းကိုအဖေသိသူ မှလွဲ၍ ဘယ်သူမှမရှိပါ။ သူတို့၏ရင်းနှီးမှုနှင့်ထာဝရရင်းနှီးမှုသည်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုဆိုလိုသည်။
မိမိကိုယ်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့။ နှိမ့်ချသူအဖြစ်ယေရှု၏ဖော်ပြချက်သည်သူ၏ဖခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။ သခင်ယေရှုသည်သူနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောသူထံမှရရှိသော "လက်ခံသူ" ဖြစ်သည်။ သူသည်ဖခင်၏အလိုတော်ကိုပြင်ပတွင် ဦး ညွှတ်ရုံမကသူအားရက်ရက်ရောရောပေးခဲ့သောအရာကိုရက်ရက်ရောရောပေးသည်။ ယေရှုသည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာနေရခြင်းကိုပျော်ရွှင်စွာခမည်းတော်နှင့်သိကျွမ်းခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၌ခမည်းတော်နှင့်အတူတူမျှဝေခံစားခြင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်သည်။
သခင်ယေရှုသည်ထမ်းပိုးအောက်တွင်ခမည်းတော်နှင့်အဆက်မပြတ်အဆက်အသွယ်ရှိပြီးထိုဆက်နွယ်မှုသည်ထာဝရတည်ရှိသည်။ သူနှင့်ဖခင်တို့သည်ပေးကမ်းခြင်းနှင့်ယူခြင်း၏တကယ့်ဆက်ဆံရေးတွင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌သခင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်မြင်သမျှကြားသမျှကြားသမျှကိုမိန့်ကြားသမျှကိုသာမိန့်ကြားသည်။ ယေရှုသည်နှိမ့် ချ၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သူဖြစ်၏၊ အကြောင်းမှာသူသည်ဖခင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခမည်းတော်ကိုသိသူများထဲမှသူများကိုသူထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်။ သူကသူတို့ကကြိုးစားအားထုတ်ပြီးဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသူအားလုံးကိုခေါ်သည်။ ၀ န်လေးနေသော ၀ န်ထမ်းများအားလုံးခေါ်ဆိုမှုသည်လူတိုင်းကိုအမှန်တကယ်သက်ရောက်သည်။ တစ်ခုခုကိုလက်ခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုယေရှုရှာနေတယ်။
သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကို“ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများလဲခြင်း” ကိုခေါ်ဆိုသည်။ ယေရှုထံလာရန်၊ သူ့ထံမှသင်ယူရန်နှင့်သင်ယူရန်မှာကြားထားသည့်သခင်ယေရှု၏မိန့်မှာချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုလွှတ်ပေးရန်မိန့်မှာထားသည်။ ကျနော်တို့ကအရှုံးမပေးနှင့်သူ့ကိုပေး ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့်ထမ်းပိုးများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်သခင်ယေရှုကသူ၏ ၀ န်ထုပ်ပိုးနှင့်ထမ်းပိုးကိုမပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထုပ်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာသို့မဟုတ်ထိရောက်စွာမည်သို့သယ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုသူကပိုမိုပေါ့ပါးပုံပေါ်စေရန်အကြံဥာဏ်မပေးခဲ့ပါ။ သူကကျွန်မတို့ကိုပခုံးတုံးမပေးဘူး၊ ဒါ့ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဝန်ထုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအနိမ့်အမြင့်တိုးစေတယ်။
သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူနှင့်ထူးခြားသောဆက်ဆံရေးရှိရန်ခေါ်ဆိုသောကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအားလုံးကိုပေးအပ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ အရာရာတိုင်းကိုသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသောအခါဘုရားသခင်ကမည်သူဖြစ်သည်ကိုမေ့သွားပြီးယေရှုကိုမကြည့်တော့ပါ။ ငါတို့သည်သူ၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထမ်းရွက်ရသောဝန်များသည်သခင်ယေရှုအမှန်တကယ်ပေးသောအရာနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
Jesus gab seinen Jüngern das Gebot «in ihm zu bleiben», weil sie seine Reben sind und er der Weinstock ist. «Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun» (Johannes 15,4-5) ။
သခင်ယေရှုကသင့်အားဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသောအသက်ပေးသောထမ်းပိုးကိုနေ့စဉ်ထမ်းဆောင်ရန်ခေါ်ယူသည်။ သခင်ယေရှုကသူ၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိမှသာအသက်ရှင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုးပမ်းသည်။ သူ့ထမ်းပိုးကိုမျှဝေနိုင်အောင်သူကငါတို့ ၀ တ်နေတုန်းပဲ၊ တကယ်ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာကိုဖန်တီးပေးပြီးငြိမ်သက်ခြင်းမှာမနေစေချင်ဘူးဆိုတာကိုပြပေးလိမ့်မယ်။
အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးနောက်တွင်သူ၏ထမ်းပိုးကိုထမ်းနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုစနစ်တကျထားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသောအခြေအနေတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ပြုမူခြင်းက ပို၍ လက်တွေ့ကျသောအခါ။
သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးအားလုံးအားယေရှုထံလွှဲအပ်သောအခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ငါတို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးအနေနှင့်သူသည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအားလုံးကိုသိပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုဂရုစိုက်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျိုးပဲ့သောဘဝ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများ၊ ရုန်းကန်မှုများ၊ အပြစ်များ၊ ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့်စသည်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌မှကုစားရန်သူ့အားဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သငျသညျသူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျလွှဲပြောင်းလွှဲပြောင်းကိုကြောက်စရာမလိုပါ: ဟောင်းနွမ်းသောဝန်, အသစ်တိုက်ပွဲများ, သေးငယ်တဲ့, အသေးအဖွဲဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများသို့မဟုတ်အလွန်ကြီးမားပုံရသည်သောသူတို့အား။ သူသည်အဆင်သင့်ရှိပြီးအမြဲသစ္စာရှိသူ - သင်ကသူနှင့်ဖခင်နှင့်အတူရှိနေသည်။
ဤသူသည်သခင်ယေရှုနှင့်အပြည့်အဝချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသောဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်အနားမှအနားယူသောဘ ၀ သစ်ကိုသင့်ထံမှဝေးကွာသွားစေခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအားဆက်လက်တိုးပွားစေသည်။ ဤခေါ်ဆိုမှုထက်မည်သည့်လက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်တိုက်ခိုက်မှု (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်မှုမဆို ပို၍ ဖိစီးမှုမရှိပါ။ မင်းကိုဘာတွေခေါ်နေတာလဲ မိမိဘ ၀ တွင်၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအတူတကွနေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်မှားသည့်ဝန်ကိုယူသောအခါသင်သတိထားသင့်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ထမ်းရွက်ရန်ဝန်လေးချက်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။
Cathy Deddo အားဖွငျ့ဖွစျသညျ